Nosamborin’ny Fanjakana Shinoa i Ilham Tohti, Mpisolovava Am-Pilaminana ireo Uyghur Vitsy An’isa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2014 22:56 GMT
Avoahy i ilham Tohti! avy amin'i @HisOvalness, ilay mpanao sariitatra ara-politika nalaina tao amin'ny Twitter
Nosamborina ny 15 Janoary sady nampangain'ny Globa Times mpitondra tenin'ny antoko Kaominista Shinoa (CCP) ho mpampisara-bazana i Ilham Tohti, ilay Uyghur manampahaizana sady mpisolovava miady ho amin'ny fampihavanam-poko. Satria nanao fanentanana momba azy ireo manam-pahaizana Shinoa maro, dia efa manomboka mahalala tsikelikely ny momba azy ireo mponina any ivelan'i Shina, eny fa na dia ny fikambanan'ny mpiray fiaviana monina any ivelany aza. Vitsy ireo mahatakatra ny ifandraisan'ny fisamborana azy sy ny mety hisian'ny ady tsy azo sitranina eo amin'ny Silamo vitsy an'isa sy ny Shinoa Han maro an'isa.
Nanambara ny Global Times tao amin'ilay laharana nivoaka ny 18 Janoary fa manana fifandraisana amin'ny Kaongresy Manerantanin'ny Uyghur i Ilham, fikambanana any ivelany izay sokajian'ny CCP ho faran'izay mpampisara-bazana. Nilaza ihany koa ilay tatitra fa nanosika ireo mpianatra tao amin'ny kilasy nisy azy izy sy nanaparitaka honohono tao amin'ny aterineton'ny Uyghur, “Uyghur Online”, vohikala iray noforoniny hiatrehana ireo olana ara-poko ao Shina miainga amin'ny fomba fijery Uyghur.
Tsy dia tsara loatra ny fifandraisan'ny mponina Uyghur, izay monina any amin'ny faritr'i Xinjing, andrefan'i Shina ny ankamaroany, sy ny governemanta Shinoa. Tamin'izany fotoana dia tena nahitàna rà nandrika mihitsy ny fifandonana nisy tamin'ireo Uyghur mpikatroka mafàna fo sy ny manampahefana.
Araky ny hita ao amin'ny fanangonan-tsonia ety anaty aterineto hitakiana ny fanafahana an'i Ilham, izay efa nahatràrana sonia 1.200 hatramin'ny 22 Janoary, toheriny ny herisetra ary tsy manohana ny fahaleovantenan'i Xinjiang izy.
Hatramin'ny fotoana nisamboràna azy, tsy afaka nidirana intsony ny tranonkalan'i Ilham ary efa nofoanana koa ny fijerena ny mombamomba azy. Wen Yunchao, izay nanampy tamin'ny fametrahana ilay fanangonan-tsonia ety tanaty aterineto, no namerina nampakatra indray ny mombamomba azy izay nalaina avy amin'ilay efa tamin'ny taona 2011. Araky ny voalazan'ilay lahatsoratra, teraka ny taona 1969 i Ilham ary mpikambana tinaizan'ny Antoko kominista Shinoa ny Rainy. Kanefa, nodimandry teo amin'ny faha 28 taonany tamin'ny 1971 noho ny Revolisiona Kolotoraly. Samy niasa tao amin’ ny biraon'ny fiarovana avokoa ny zokiny lahy roa.
Tao amin'ny Oniversite Dongbei Normal University no nahazoany ny Diplaomany avy ao amin'ny Oniversite Foibe Ao Minzhu, sampana Toekarena. Nanomboka nanao ny fikarohany mikasika ny olan'ny fampianarana ireo tambanivolo vitsy an'isa sy ny fampivoarana ara-toekarena tao amin'ny Ivontoeram-pikarohana ara-toekarena tao amin'ny Oniversiten'i Minzhu izy, no sady nampiasa vola tao amin'ny tsenan'ny fanondranana sy ny Orinasa vaventy nandritra izany fotoana izany.
Ny Febroary 1997, niafara tamin'ny famoretana mahery vaika nataon'ny polisy ilay hetsika am-pilaminana natao tao amin'ny tanànan'i Yining, faritra Avaratra Andrefan'i Xinjiang. Nanomboka tamin'izay ny politikan'ny governemanta dia nanapa-kevitra ny hanimba ny “Hery telo”-n'ny fampisaraham-bazana, ny fivavahana ary ny herisetra. Nahilikilika ireo Uyghur manam-pahaizana izay nanakiana ilay politika henjan'ny governemanta, isan'ireny i Ilham, izay nahafantatra fa tsy afaka intsony hamoaka ny voka-pikarohany izy ny taona 1999. Teo anelanelan'ny 1999 sy ny 2003, nesorina taminy ihany koa ny zony maha mpampianatry ny Oniversite azy ka dia nandany ny fotoanany nivezivezy tany Afovoany Atsinanana, Rosia ary Azia Avaratra izy hanampy ireo Orinasa Shinoa hampiroborobo ny fandraharahan'izy ireo sy nanadihady ny fifandraisana ara-poko any amin'ireo faritra ireo. Nanatri-maso ny rà mandrika voka-dratsin'ny adim-poko izy ary naniry ny tsy hitrangan'ny toy izany ao Shina.
Tamin'ny finoana fa hitondra ho amin'ny firindran'ny fiarahamonina ny fampandrosoana ara-tsosialy, toekarena ary kolotoraly, hatramin'ny fifanakalozan-kevitra mahomby eo amin'ny samy foko, no antony nanapahany hevitra hanangana ny Uyghur Online na Uyghur anaty Aterineto ny faran'ny taona 2005 ho toy ny sehatra iray hifanakalozana fomba fijery ao amin'ireo foko Shinoa Han sy Uyghur hevitra.
Kanefa, ny korontan'ny 5 Jolay tao amin'ny renivohitr'i Urumqi ny taona 2009, no vao mainka nmadika ho politika ny tsy fifanarahana teo amin'ny Shinoa Han sy ny Uyghur, ary ho fanapahana izany tsingerina ratsy izany , nalefany ilay fanentanana hoe “Fampihavanana ara-poko” mba hankalazàna ny tsingerintaonan'ilay faha-5 Jolay ary nikarakara fandaharanasa fifanakalozana ho an'ireo ankizy avy aminà fianakaviana Han sy Uyghur izy. Uyghur Online koa dia natao hiresahana ireo olana ara-tsosialy toy ny fitadiavana zaza Uyghur very.
Tao amin'ny Filazana ny mombamomba azy, no nanakianan'i Ilham am-pahibemaso ilay hetsika mpampisara-bazana :
Miatrika fanamby miavaka mifamatotra amin'ny resaka foko ny faritr'i Xinjing, ary ireo faritra hafa ao aminy ankehitriny. Raha samy jerena avokoa na ny ara-pihetseham-po na ny maha olona, tsy ekeko ny hisarasarahan'ny faritra [hiala amin'i Shina].
Ny fijerena akaiky ny fahaleovantenan'ny foko tsirairay no lalàna iray hamahàna ireo olana momba ny foko. Mety hanamora ny hahatonga an'i Shina ho firenena be karazanà foko sy hanana fahasamihafàna ara-kolotoraly io.
Miaro ny fahaleovantena ara-poko ny lalam-panorenana ao Shina ary mamatsy tontolom-pivoarana eo amin'ny sehatry ny fahasamihafana ara-kolotoraly, ara-poko. Ilaintsika ny mitrandraka tsikelikely ny fahafahana mampihatra izany sy mametraka azy ho anaty lalàna. Tokony ho sahy isika maka ny traikefa niainan'ireo firenena hafa ary manamboatra làlana ho an'i Shina.
Ho fanatsiniana ny fiampangana nataon'ny Global Times an'i Ilham ho nandrisika ny mpianany, mpianatra iray avy amin'ny Han no nampakatra lahatsoratra lavabe miendrika sary tao amin'ny Sina Weibo, ilay vohikala malaza fitorahana bilaogy kiritika. Nofafana haingana ilay lahatsoratra, kanefa misy tahirin'izany ao amin'ny Flickr :
Tamin'izaho teo amin'ny taona fahatelo teny amin'ny anjerimanontolo, nisafidy ny hanaraka ny lalam-piofanany mikasika ny tetikadim-pampandrosoana maharitra aho tao amin'ny Xinjiang […] Izaho ihany no hany Han mpianatra tao an-dakilasy ary mahatsiaro tena ho lasa an-jorony aho isaky ny tonga ao an'efitrano fianarana. Kanefa tena noraisiny tsara aho tamin'izany ary dia nahatsiaro tena ho nohajaina tokoa. Taorian'izany, nohazavainy tamiko [ny fihetsiny tamiko] fa amin'ny maha Uyghur mpampianatra ny tenany, dia hajainy ny Han mpianatra izay liana amin'ny resaka fampandrosoana ara-toekarena ao Xinjiang.
Taorian'izany, nanangana ilay Uyghur Online izy, nanao fikarohana, nanangana tobim-panampiana ny vondrom-piarahamonina ary nanampy ireo ankizy Uyghur nalaina an-keriny hiverina any amin'ny fonenany tsirairay avy. Nifandray matetika hatrany izahay taorian'izany[…] tsy mino ny zavatra rehetra lazain'ny haino aman-jery momba azy mihitsy aho.
Mpampianatra ahy izy, olona fantatro, mahatarika. Raha toa ka tsy maintsy hanome mpamaritra azy aho, dia hoy aho hoe tsy mpanao politika velively izy , tsy revolisionista ihany koa. Fa olona iray manam-pahasahiana.
Ilay fitakiana anaty aterneto dia mitaky ireo manam-pahefana hamoaka an'i Ilham na farafaharatsiny hilaza ireo fandikan-dalàna nambara ho nataony ary hamela ny fianakaviany sy mpisolovava iray tendrena mba hihaona aminy. Namoaka fanambarana iray ny vadin'i Ilhamn ny 20 Janoary nitaky ny hamoahana ireo mpianatra efatra izay voasambotra ihany koa ny 15 Janoary.
Raha te-hahalala bebe kokoa momba io tantara io avy amin'ny Global Voices Advocacy, jereo ny China: Free Ilham Tohti — Support Ethnic Reconciliation.